के हस्तमैथुन समस्या हो ? « Naya Page
प्रकाशित मिति :7October, 2019 2:01 pm
काठमाडौं, २० असोज । म २२ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । मेरो समस्या हस्तमैथुन हो । मैले विगत नौ वर्षदेखि दैनिक रूपमा हस्तमैथुन गर्दै आएको छु । के हस्तमैथुन गर्नाले शारीरिक कमजोरी हुन्छ ? के धेरै हस्तमैथुन गर्दा सन्तान जन्माउन सकिँदैन ? यो समस्याबाट छुट्कारा पाउने उपाय के हो ? हस्तमैथुन गर्दा वीर्य नष्ट हुन्छ ? कतै मेरो शारीरिक कमजोरीको कारण हस्तमैथुन त होइन ?
झापामा थप ५२ जनालाई कोरोना, झापामा संक्रमितको संख्या १०५ पुग्यो